MACLUUMAADKA TARANKA EEYAHA THAI RIDGEBACK IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Eeyaha Thai Ridgeback iyo Sawiro
Thai Ridgebacks - Julie oo 10 jir ah, Navinee oo 2 jir ah iyo Winner oo 2 jir ah
Thai Ridgeback Eyga
Thai Ridgeback wuxuu leeyahay jir jilicsan, oo muruqyo ah. Dhabarka dambe waa mid adag, adag oo timo cufan ku daboolan. Midabada Coat-ka waxaa ka mid ah: xabadka, madow, buluug iyo qalin. Waxay leedahay cirifka dhabarkiisa, oo ay sameysantay timo jihooyin ka soo horjeeda u kora kuwaas oo sameeya wareegyo iyo wareegyo. Garbaha waa xoog iyo muruq. Madaxa ayaa kor loogu qaadayaa korkiisa adag, adag, qoorta oo nadiif ah. Afka ayaa u eg qaab wareegsan oo xoog leh. Carrabku waa inuu noqdaa buluug ama buluug buluug ah. Dhegaha waa weyn yihiin, meel sare yihiin, saddexagal leh, leexleexan oo horay u janjeedha. Dhakada qalfoofkeedu waa fidsan yahay oo waxay u degi doontaa si tartiib tartiib ah. Indhaha madow-bunni-ga ah waa yicib u eg oo leh feejignaan. Sanka waa madow dabada ayaa ka sii dhumuc weyn salka hoose ee taabashada caarada. Feeraha si wanaagsan ayaa loo booday oo aan lahayn wax muuqaal foosto u eg. Lugaha dambe waa dheer yihiin, dhex dhexaad u leexdeen oo xoogaa u laaban yihiin xuubka. Qoorta gadaasheeda waxay leedahay duub maqaar oo dheeri ah marka eey soo jeedo. Tan waxaa si gaar ah loogu arkaa eeyo yaryar.
Ilaa dhowaan Thai Ridgeback waxyar lagama aqoon meel ka baxsan bariga Thailand waana dhif iyo naadir meelaha kale. Noocani waa waardiye fiican, waardiye iyo eeyga ugaarsiga, laakiin sidoo kale wuxuu sameeyaa wehel wanaagsan. Adag oo firfircoon leh awood boodbood fiican. Waa eey aad u firfircoon oo feejigan laakiin sidoo kale la'aan is dhexgalka bulshada waxay noqon kartaa xoogaa ka fog shisheeyaha. Waxaa laga yaabaa in adag tahay in la tababaro . Thai Ridgeback waxay u baahan tahay a milkiilaha xukuma yaa fahmaya taranka. Mid leh maamulka dabiiciga ah , si adag oo deggan laakiin kalsooni leh oo waafaqsan xeerarka lagu dul saaray eeyga . Milkiilaha Thai ee aan eeyga saxin xilliyada ku habboon ayaa laga yaabaa inuu ogaado in eygu yeesho u janjeera dagaal. Iyada oo gacanta midig Marnaba kama daahin in la xakameeyo dabeecadaha aan loo baahnayn mar haddii milkiilayaashu bartaan sida habboon eeyga loola dhaqmo, oo ay la socdaan bixinta jimicsi maskaxeed iyo mid jireed .
Dhererka: Ragga 22 - 24 inji (56 - 60 cm) Dumarka 20 - 22 inji (51 - 56 cm)
Miisaanka: 51 - 75 rodol (23 - 34 kg)
Marka loo eego heerka rasmiga ah ee FCI, ma jiraan wax shuruudo miisaanka ah.
Nooc aad u caafimaad qaba.
Thai Ridgebacks waxay ku fiicnaan doontaa guri dabaq ah haddii ay si ku filan u jimicsato. Eeyahaani waxay doorbidaan cimilo diiran mana adkeysan karaan dhaxanta.
Boqor Charles isku darka spaniel cavalier
Noocan waa inuu helaa jimicsi fara badan, oo ay ku jiraan socod dheer .
shih tzu terrier mix madow
Ilaa 5 eey
Thai Ridgeback uma baahna qurxin badan. Shanlaab mar mar ah iyo cadayasho si looga saaro timaha dhintay ayaa sameyn doona.
Thai Ridgeback ayaa laga helay bariga Thailand ilaa qarniyadii dhexe. Beeraleyda Thai waxay ku qiimeeyaan noocyadan inay yihiin eeyo ilaaliya. Eygan oo ah mid aad u ilaaliya ayaa loo yaqaanay si fudud 'Eyga gaari-raaca.' Waxaa markii ugu horreysay la keenay USA 1994-kii oo uu keenay Jack Sterling. Wuxuu daahfuray oo ku kasbaday caanihii fursad nasiib safarkii Bangkok Thailand. Eeyaha waxaa loogu yeeri jiray Mah Thai Lung Arn, laakiin Jack wuxuu bilaabay inuu ugu yeero 'Thai Ridgeback Dog' ama 'TRD' oo la soo gaabiyo. Markay ahayd 15-kii Maarso ee sanadkii 1994-kii, Jack wuxuu kaxeeyay labadiisii ​​ugu yaraa seddexdii jeer ee uu dhawaan helay eeyaha Thai isla markaana haatan caan ku ah TRD si uu ugu muujiyo bandhigga 'ARBA's 3rd Cherry Blossom Rare Breed Dog Show' oo ku yaal Washington DC ee ku taal Mall-ka qaranka hortiisa Dhismaha Capitol halkaas oo uu ku guuleystay. fasalada uu galay. Jack Sterling wuxuu dib ugu noqday Thailand bishii Oktoobar 11th 2003 si uu u sii wado barnaamijkiisa taranta isagoo adeegsanaya Eygiisa Chiang Mai Thai Ridgeback Dogs oo adduunka ka keenaya.
Kooxda Qaybta FCI ee 5 (Spitz iyo noocyada aasaasiga ah) Qaybta 8 (Noocyada Aasaasiga ah eeyaha Ugaarsiga oo leh dhabarka xaggiisa dambe), Iyadoo aan la tijaabin shaqada
ATROF = Ururka Milkiilayaasha Thai Fangeers & Fanciers
KCTH = Kennel Club of Thailand (oo horey loo oran jiray DAT)
TRCUS = Naadiga Thai Ridgeback ee Mareykanka
'Sawir uu qaaday James at Manape Thai Ridgeback: eeyaha kala duwanaanshaha ah ee loo kala soocay caafimaadka, dabeecada iyo isweydaarsiga: ku faanida eeyaheena ha ahaato tarankayaga iyo muujinta dadaalkeena ama waxaan la dhigeynaa kuwa kale oo jecel.'
'Guuleyste waa eey Thai Ridgeback ah. Noocani waa nooc hore. Waxaan ka soo iibsanay Thailand hadana wuxuu ku noolyahay Nederland isaga iyo 2 saaxiibadiisa kale ee Thai Ridgeback. '
Ku guuleystey Thai Ridgeback da'da 2 sano
Mahadsanid Manape Thai Ridgeback - Sawir waxaa qaaday James
silig Pit lehba isku darka yorkie
'Tani waa Balto, Thai Ridgeback oo ka socota mid ka mid ah qashinkeenna. Sawirkan wuxuu kudhowaad yahay 6 usbuuc wuxuuna waqti la qaadanayaa 10 walaalihiis ah. Wuxuu jecel yahay inuu ku ciyaaro alaabtiisa, laakiin wuxuu neceb yahay inuu la wadaago walaalihiis. Balto waa mid aad u eyga xukuma markaa lama iibin ilaa uu 5 bilood jiray. Qoyska milkiilihiisa ayaa ku khilaafey xulashadeeda inay iibsato waxayna kala hadleen inay siiso saaxiib.
Eeg tusaalooyin badan oo Thai Ridgeback ah
Thai Ridgeback Sawirada 1
Thai Ridgeback Sawirada 2
bakoorad isku qasan eeyo yaryar oo iib ah
Jack Russell rat isku darka Pit dabeecad
amerikanka bulldog pitbull feer isku dhafka
dogue de Bordeaux god isku darka